Yaa Rabbi Nu Beeysisi Yaa Allah – Site Title
Posted byabdiaminbakar 4th Jun 2021 Posted inUncategorized
“Osoo wal jaalannuu wal caaluu jaalanna.
Wal caaluu jaalachuun badii miti, Rabbiitu wal caalchisee nu uume waan ta’eef.
Gaafa wal caaluu jaalannu garuu, kaayyoo walcaaluu jaalanneef jidduu garaagarummaatu jira. Yoo nama caaluu jaalachuun kee nama caaltu sun gargaarsa Rabbiitiin akka si caalu taasisuuf ta’e, Rabbiin caalaa si taasisee jira.
Funyoon sadarkaa sun ga’uu irraa hiitee si dhaabdu hin jirtu.
Yoo nama caaluu jaalachuun kee caalaa ta’uun akka siif baramu qofaaf ta’e Rabbiinuu biyyatti sin dhiisu.
Of tuffachuun si miidha, wal tuffachuun biyya miidha. Of tuffachuu fi wal tuffachuun waan jibbamtuu dha. Of tuffachuun rabbiin akka hin tuffatamne si taasisuu danda’uu isaa dagachuudha. Wal tuffachuunis ati akka hin tuffatamne kan si taasise rabbi ta’uu fi namoota ati tuffattu rabbiin sirra caalchisuu akka danda’u dagachuudha.
Haalli jireenya namoota baay’eedhaa, kan amantii qabuu fi hin qabneetiis akkanumaa akkasi.
Karaa dogoggoraa deemuun yoo wallaalaaf ta’e badii hin qabu. Barraan isa sirriitti jijjiirratta. Yoo osoo beekhanii ta’e garuu kharaan sirrii isuma sana. Kan beekhaa kharaa jallaa deemu xumurri daandichaa eeysa akka ta’ees hin wallaalu.
Daandiin tokkichi qajeelaan of tuffachuu fi wal tuffachuu dhiisuudha. Akkasitti qofa ofii fi biyyaafis ta’uun danda’ama. By:R/B
Rabbin Nuha Dammaqsuu